WhatsApp dia manana rakipeo vaovao: mpampiasa 1.000 tapitrisa isan'andro | Vaovao momba ny gadget
WhatsApp dia manana firaketana vaovao: mpampiasa 1.000 miliara isan'andro
Mino izahay fa ireto tarehimarika manaraka ireto dia naneho fa na dia manan-danja amin'ny andavanandrom-piainan'ireo mpampiasa aza ny tambajotra sosialy, dia vao mainka izany aza ny fampiharana fandefasana hafatra eo noho eo. Ity no tranga WhatsApp. Betsaka ny mpanaratsy azy ary maro hafa hatramin'ny nandraisan'ny Facebook ny serivisiny. Ankehitriny eTsy nanakana ny fahatongavan'ireo firaketana izany ary isan-taona dia nitombo ny isany.
Tamin'ny taon-dasa dia nanambara ny ekipa WhatsApp fa nahavita quota ho an'ny mpampiasa 1.000 tapitrisa isam-bolana. Na izany aza, io tarehimarika io ihany no asehon'ny fampiharana fandefasan-kafatra mailaka malaza indrindra isan'andro. Izany hoe, araka ny nambaran'izy ireo indray tao amin'ny bilaogy ofisialy, WhatsApp dia nahatratra quota misy mpampiasa 1.000 isan'andro. Saingy tsy mijanona eto ireo tarehimarika, nofariparitan'izy ireo hoe inona ny isa isan'andro.
Ho fanombohana, amin'ireo mpampiasa 1.000 tapitrisa isam-bolana dia manana 1.300 tapitrisa isika izao. Ary koa, ny fandefasana hafatra isan'andro erak'izao tontolo izao dia tena goavana. Ny voalohany: Hafatra an-tsoratra 55.000 miliara no alefa isan'andro. Mikasika ny resaka haino aman-jery dia tsy dia mahavariana tahaka ny teo aloha ireo tarehimarika, fa tsy mijanona ny fiakarana. Isan'andro Mizara horonan-tsary 1.000 miliara sy sary 4.500 miliara ireo mpampiasa WhatsApp.
Mandritra izany fotoana izany, ny ekipan'i Ny WhatsApp koa dia mampiseho amin'ireo tarehimarika fa ny fampiharana fandefasan-kafatra eo noho eo dia misy amin'ny fiteny maro be —60 marina izany—. Ary io dia tokony hijerena fotsiny ianao mba hahitanao ny dikan'ny fampidirana ao amin'ny tsenan'ny fivezivezena ho an'ny fampiharana toa an'io. Taona vitsy lasa izay, ny lazan'ny finday BlackBerry dia tratra noho ny serivisy toa ny BlackBerry messenger. Rafitra fandefasan-kafatra nikatona izay nahafahan'ny mpampiasa terminal Kanada nifampiresaka tamin'izy ireo. Ary ny tsara indrindra: amin'ny fotoana tena izy, zava-baovao tamin'izany fotoana izany. Na izany aza, ny fahafahako manao izany amin'ny sehatra rehetra - ity no nahatratrarana WhatsApp - nahatonga ireo karazana terminal ireo hadino kely.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Software » WhatsApp dia manana firaketana vaovao: mpampiasa 1.000 miliara isan'andro
Horita Android 8.0?
Ahoana ny fampiasana ny fanairana sy ny fanairana amin'ny Windows 10